भाले बासेको साँझ ~ brazesh
June 17, 2009 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट2comments
अनि,तिनै निम्त्याइएका मान्छेहरूले स्न्याक्स घुमाउन कञ्जुस्याइँ गरेको,धेरै खालान् भनेर चिल्लोपीरो बढी हालेको, परिकारहरू कम भएको जस्ता गुनासो गर्दा हात जोडेर माफी माग्दै बिदा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ दुलाहा वा दुलहीको उचाइ, मोटाइ, वर्ण, नाकनक्सा, पारिवारिक पृष्ठभूमिजस्ता कुराहरूमा पनि धेरथोर प्रतिक्रिया सुनेर सहनुपर्ने त आफ्नै ठाउँमा छँदैछ ।
सामाजिक संस्कारहरूमा यतिभन्दा बढी गर्न नहुने भनेर बेलाबेलामा मापदण्डहरू तोकिने गर्छन् तर अधिकांश समयमा त्यस्ता नीति-नियम बनाउने र समाजमा उदाहरण बन्न सक्ने हैसियतका मानिसहरूले नै त्यस्ता मापदण्डको भकुन्डो खेल्छन् । अहिले त झन् हिन्दी सिनेमा र धारावाहिकहरूबाट प्रभावित हाम्रो समाजमा भोजभतेरको थलोमा दुलहादुलहीलाई बिहारतिरको नौटंकीमा देखिने इन्द्रको आसनजस्ता सजाइएका अचम्मका कुर्सीहरूमा शोभायमान गराएर राख्ने चलन पनि छ । आफ्नो नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न तम्सेका ती जोडीहरू कहिल्यै नचिनेका नातागोताहरूलाई नमस्ते गर्दागर्दा थकित भएर बसेका हुन्छन् । अर्को परिवारका ती दुर्लभ नातेदारहरूलाई कुनै दिन अन्त कतै भेट्दा सायद उनीहरूले चिन्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले बिहेका भोजहरू कतिपय बोलाउने र बोलाइने दुवैका लागि बाध्यताजस्ता हुने गर्छन् । कतिपय ठाउँमा त आफूले चिनेका मान्छेहरू पनि खोज्न गाह्रो हुन्छ ।
यसै प्रसंगमा केही दिनअघि वरिष्ठ शल्यचिकित्सक सरोज धितालकी छोरीको बिहेको कुरालाई उल्लेख गर्नु समयसापेक्ष हुन्छ । त्यो बिहे धेरै कुरामा उदाहरणीय थियो । सबैभन्दा रमाइलो त के भने उनीहरूले हाम्रो समाजमा चलिआएको बाध्यात्मक प्रचलनलाई सजिलैसँग परविर्तन गरििदएका थिए । बिहे भनेको दुलाहा र दुलहीको जीवनको एक अविस्मरणीय र महत्त्वपूर्ण घटना हो भनेर निम्तालुहरू छान्ने जिम्मा नै उनीहरू दुई जनालाई दिइएको थियो । उनीहरूको जीवनको सुरुवातमा कसको उपस्थिति चाहन्छन्, ती नै निम्त्याइएका थिए । बिहेको नाममा गरिने झमेलाहरू केही पनि गरिएको थिएन । दुई परिवार बिहान सँगै बसेर साधारण हिसाबले माला-औँठी साटासाट गरेपछि साँझ थोरै मान्छेहरूका बीच दुवैले आफ्नो दाम्पत्य जीवन सुरु भएको जानकारी गराएका थिए अनि एकअर्कालाई साथ दिने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि सर्वधर्म परिषदबाट इसाई, हिन्दु, मुसलमान र बौद्ध धर्मका एक-एक गुरुहरूले ती जोडीलाई आशीर्वाद दिएका थिए । र, बिहे सकिएको थियो ।
अर्को उदाहरणीय पक्षचाहिँ त्यो अन्तरजातीय विवाह थियो । आज हामी नेपाली-नेपालीबीच जात र सम्प्रदायको कुरा डढेलो बनेर सल्किरहेका बेला यो एउटा आशा जगाउने कार्य थियो । यदि डा धितालझैँ सबै बाबुआमा यो कुरामा उदार भइदिने हो भने भोलिको पुस्तालाई बाहुन, नेवार, राई, लिम्बू वा अन्य कुनै जात वा थरको विभाजनको पीर हुँदैन । हिजोको पुस्ता पनि कट्टर नभइदिएको भए आज हामीले भोगेको विखण्डनको अनावश्यक भारी हाम्रो काँधमाथि हुँदैनथ्यो होला । तर, दुःखको कुरा त के भने अनपढदेखि लिएर पढेलेखेकासम्म कतिपय बाबुआमाहरू आज पनि जात र धर्मका नाममा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बलि चढाइरहेका छन् । आज पनि हाम्रो समाजमा यही कारणले गर्दा टुटेका सम्बन्धहरूका कारण आफ्नो जीवन नर्क बनाएर बाँचेकाहरू वालछ्याल देख्न सकिन्छ । आँटै गरेर भिड्नेहरूको जीवनलाई पनि हाम्रो समाजले एउटा लामो संघर्षको कथा बनाइदिन्छ ।
यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बाबुआमाले सहज रूपमा यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार गरििदनासाथ समाज भन्ने जनावर कुर्लन सक्दैन । तर, जब अभिभावकहरूले नै ती सम्बन्धहरूलाई अनेकौँ बहानामा अप्ठ्यारो बनाउँछन्, त्यतिबेला समाज झुन्ड बनाएर अरूको जीवनका बारेमा निणर्ायक बन्न तम्सिन्छ । वर्षौंदेखि चलिआएका कुराहरू र आफूले वर्षौंदेखि पालिरहेका मूल्य र मान्यताहरूलाई परविर्तन गर्न मान्छेलाई कठिन नहुने होइन । तर, कुनै जमानामा सही मानिएका कुराहरू अहिले आएर समय र चेतनाको कसीमा घोट्दा अर्कै रूपमा देखिन सक्छन् । हामीमा त्यो परविर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्ने ह्याउ हुनैपर्छ ।
एक जना परिचितकी छोरीले केही समयअघि यस्तै अन्तरजातीय बिहे गर्नका लागि झन्डै तीन वर्ष बाबुआमासँग संघर्ष गर्नुपरेको स्मरण पनि यो पंक्तिकारको मनमस्तिष्कमा ताजै छ । अरू सबै कुराले लायक त्यो केटो जात नमिलेका कारणले मात्र उनीहरूका लागि अस्वीकार्य थियो । त्यतिबेला उनीहरूलाई सम्झाउन खोज्नेभन्दा बढी भड्काउने आफन्तहरू थिए । अरूको जिन्दगीमा समस्याहरू बल्झाएर रमाइलो मान्ने प्रवृत्तिका तिनै आफन्तहरू उनीहरूलाई त्यतिबेला शुभचिन्तक लाग्थे । तर, अन्ततः उनीहरूले छोरीको जिद्दीका सामु घुँडा टेके । अहिले अवस्था बिलकुलै भिन्दै छ, ज्वाइँ र ससुराभन्दा बढी बाबुछोरा छन् उनीहरू । तर, यही समाजमा अर्का परिचितका एक जना छोरा वर्षौंदेखि बाबुआमाको मन दुखाउन नसकेर आफ्नो छातीभित्र विरहको आगो बोकेर बाँचिरहेका पनि छन् ।
राजनीतिक क्रान्ति र परविर्तन मात्रले नयाँ केही पनि बन्दैन । सामाजिक क्रान्ति अनि वैचारकि परविर्तन मात्र नयाँ युगको भाले बनेर बास्न सक्छ । डा धिताल र उनीजस्ता अरू बाबुआमा ती भालेहरू हुन् । तिनले बासेको आवाजलाई विभाजनका पक्षपातीहरूको कोलाहलमा हराउन दिनुहुँदैन । एकपछि अर्का भालेहरू बास्न थाल्नुपर्छ । सिमसिमे राजाको पालोमा बनेका बाहुन, क्षत्री, वैश्य वा शूद्र भन्ने प्रथा भोलिको पुस्तामा बाँकी नरहेर सबै नेपाली मात्र भैदिए भने हाम्रा कति समस्याहरू आफैँ हराएर जालान् । अनि, त्यो अनावश्यक विवाद र झैँ-झगडामा खेर जाने समयलाई हामीले अरू कति आवश्यक कुरामा खर्चन पाउँला ।
यही आशावादी सपना देख्दै त्यस दिन डा सरोज धिताल र सुलोचना मानन्धरकी छोरी अनि उनीहरूका मगर ज्वाइँसापलाई शुभकामना दिएर फर्कें म ।
Luna June 17, 2009 at 10:40 PM
समाज लाई पढिदै मार्ग दर्शन दिने लेख हरु लेखिरहनुहोस् ! शुभ कामना हिर्दय देखी नै ।
Neeti Aryal Khanal June 18, 2009 at 12:36 PM
Dr. Dhital and Sulochana Mandhar are ideal couple in themselves. I really liked the fact that the bride and bridegroom were blessed by leaders of all religion. The article is really thought provoking and makes people think about change